Ubuntu nwere ike ibughari nfe n'etiti nsụgharị LTS | Site na Linux
Ugbua ozi m na-ewetara gị na-agba ọsọ dị ka ọkụ ọhịa na weebụ, ọ bụkwa na mgbe ọ bịara Ubuntu a na-ahụ mmetụta mgbasa ozi na nkesa ndị ọzọ. Mana lee ụfọdụ echiche m banyere nke a.
Uru na ọghọm.
Ọ bụrụ na anyị ahụ ya site n'ọnọdụ ndị ọrụ, ihe niile ga-abụ uru. Ohere nke launching «ọhụrụ version Ubuntu»Kwa afọ abụọ, oge zuru oke ịghara ịkpụzi PC anyị ma nweta nkwụsi ike n'echiche ahụ.
N'oge ahụ, anyị ga-anọgide na-enweta mmelite n'aka Kernel ma ọ bụ mmemme ndị ọzọ anyị na-ejikarị eme ihe, na-agbaso okwu nke Rolling Hapụ. Ruo ebe ahụ ihe niile dị oke mma.
N'aka nke ọzọ, ọ nweghị ihe akọwapụtara banyere echiche a na amaghị m ma ọ bụrụ na Canonical (ka mma gwa Uncle Mark) echiche a masịrị gị, ma ọ bụ ndị niile "tinyere ego" na nkesa a, n'ihi na o doro anya nkwalite ọpụpụ nke Ubuntu na anyị na-ahụkarị kwa ọnwa isii.
Echere m na na mgbakwunye, nke a nwere ike inwe ihe ọzọ na ndabere metụtara Ubuntu Ekwentị OS. Echeghị m na ọ dị mfe ịtachi obi na mmepe na ntọhapụ n'etiti nsụgharị maka mbipụta PC na nke Mobile, yana inwe afọ 2 n'etiti na mmelite na-agbanwe agbanwe, ebe ọrụ ahụ ga-adị obere.
Mana nke ahụ bụ echiche m ma eleghị anya ana m ekwu okwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Ubuntu nwere ike ịbụ ịfefe ntụgharị n'etiti nsụgharị LTS
Enwere m obi ụtọ hehe, m ka na-akụ nzọ na ubuntu karịa ndị ọzọ na-eche na ọ ga-akacha mma.
Enwere m obi ụtọ karịa Arch, were onwe gị na Ubuntu Rolling 🙂 naanị melite ịdị n'otu ntakịrị, nke m chere dị oke mma. N'uche m, ọ ga-adịwanye ike karịa ntọhapụ nke ugbu a, ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ Canonical na-ebugote nchịkọta ahụ ga-abụ nnwale wee gaa Main. Echere m na nke a ga-ejupụta oke nnabata Ubuntu.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka desktọọpụ, m na-ejikarị xfce na lxde, ugbu a, m na-eji kde na nke ịdị n'otu dị ka distro ọ bụla jọgburu onwe ya.
Enwere m Unity na ule m Archlinux, ọ na-arụkwa ọrụ nke ọma ...
Nke ahụ dị mma ịmara, otu ụbọchị m ga-eji ịdị n'otu karịa ọnwa 1 hehe.
Ọ bụ ihe dị mma ị na-ekwu banyere oke ọrụ, ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ na-etinye ya na kwa ọnwa isii ọ bụla, ọrụ ahụ agwụchabeghị 6%, ọ ga-aka njọ ma ọ bụrụ na ha gbakwunye ọrụ ọzọ dị ka mkpa nke ekwentị Ubuntu.
Banyere mgbasa ozi, ha kwesịrị ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịgbasa ditro raara nye naanị ekwentị ubuntu, n'ihi na ọ bụrụ na ha arụ nnukwu ọrụ, ndị ahịa ikpeazụ, na-enwe afọ ojuju maka arụmọrụ nke ekwentị, ga-abanye ozugbo itinye Linux na kọmputa ha. .
Mana ọ bụrụ na ha adaghị na ndị na-azụ ahịa achọpụta ihe na-adịghị mma, kwue nke ọma n'iweta ndị na-eso ụzọ iji sọftụwia n'efu. Ha ga-enweta echiche na-ezighi ezi banyere ihe Linux bụ, na distros niile ga-akwụ ụgwọ maka otu.
(Buru n'uche na ọtụtụ ndị na-eji windo ọbụlagodi na ha nwere otu puku nsogbu na kọmputa ha, ị maraworị okwu ahụ: "amara nke ọma karịa mma ịmata")
Enwere m olile anya na ha na-eme nke ọma na oru a ma yabụ ụwa nke Linux maara ọtụtụ ndị mmadụ.
Enwere m mmasị n'echiche ahụ, echere m na ọ bụ ihe Cannonical debere ma kwụọ ụgwọ maka ya. Ldị LTS dị ezigbo mma ma kwụsie ike, na-enye ngalaba azụmaahịa ụzọ ọzọ ka mma (ma ọ bụrụ na ọ bụghị naanị Red Hat na Novell iji lee anya). Android na iOS bụ ndị eze ka ọrụ maka otu ndị Cannonical ga-esi sie ike, yabụ ahụrụ m na ọ ga-ekwe omume na ha ga-elekwasị anya na LTS na mmelite kwa ọnwa 6. Nke ahụ bụ ihe m chere na agbanyeghị na anaghị m eji aghara a, enwere m olileanya na ha ga-aga nke ọma.
«... a ogologo oge iji ghara Ọkpụkpọ anyị PC ma nweta kwụsie ike n'echiche ahụ.»
Ọfọn, ọ bụghị ibu ọrụ itinye ụdị Ubuntu kachasị ọhụrụ n'etiti LTS ọ bụla, ị nwere ike ịga n'ihu na ya ruo mgbe onye ọzọ ga-apụta ... ma taa nkwado ahụ ga-erute 2 LTS.
A na-anọgide na-emelite kernels na ọtụtụ sọftụwia ahụ, ihe anaghị agbanwe agbanwe bụ desktọọpụ na sọftụwia dabere na ya.
Anaghị m ahụ ebe dị anya na enwere ike ime nke a, na ịtọhapụ sọftụwia ahụ mgbe ọ dị njikere, ma ghara ịgba ọsọ ịhapụ nsụgharị ọ bụla ọnwa isii ọ bụla.
Enwere ọtụtụ ihe ị kwesịrị ịtụle ma ọ bụrụ na ịchọrọ ime nke a na Canonical. Echiche ahụ adịghị njọ ma ọlị, na n'ezie ọ ga-abụ uru dị ọcha maka ndị ọrụ ọ bụrụ na emechara nke ọma.
Cheta na ịme mgbanwe kernel abughi ihe kachasi nma n'ihe banyere ndi okacha amara na nsogbu ndi o nwere ike ibute otutu onodu; enwere ike, mana ọ gha ime nke ọma.
Ọfọn, ọ ga-abụ n'ihi, a anụ otu (LTS) na ọzọ ule ma ọ bụ sid (Rolling)
Hmmm, anụbeghị m nke ahụ gbasara Debian Squeeze, Wheezy na Sid, mmadụ nwere ike ịkọwara m ya?
Debian piakpo bu aha ulo oru ugbua (Debian 6).
Wheezy bụ aha ngalaba nyocha ugbu a (ngalaba ga - eme n'ọdịnihu, nke ahụ bụ: Debian Wheezy bụ Debian 7)
Na sid bụ ejighị n'aka alaka
Ahhh ugbua. Ọ bụ otu n'ime ihe ị na-amaghị ma na ị gụrụ ọtụtụ oge ọtụtụ oge, ị nwebeghị mgbe ị ga-ajụ ihe ọ pụtara. Daalụ 🙂
Na-akpali mmasị, ana m eche ihe elementrị na mint ga-eme mgbe ahụ.
olile anya gbanwee isi.
ọ bụ ezie na ha ka nwere ike ime ihe otu egwuregwu Manjaro
Isi ụlọ akwụkwọ elementrị dabere kpamkpam na LTS, yana ịgbakwunye sọftụwia nke ya.
Tinye otu ihe ahụ, naanị na nsụgharị ahụ agaghị abụ ọnwa isii ọ bụla, site na 6, ha ga-ahapụ 14.04, sitekwa na nke ahụ mgbe Ubuntu 17 ga-apụta .... nke ọ bụ ezie na ọ ka dabere na Debian, nwere nnwere onwe zuru oke ma na ngwanrọ na ebe nchekwa.
Onwe m, ọ masịrị m na nkesa ahụ na-apụta Rolling Release, yabụ na anyị ga-enwe usoro emelitere mgbe niile yana ụdị ndị kachasị ọhụrụ nke ihe niile anyị etinyela ma chere 6 ọnwa maka mmelite zuru ezu.
Canonical ga - emeri obere ọrụ. Nsogbu na kernel 3.xx, -xx, mgbe ahụ ihe ndị a. Kwesighi inye nsogbu ịmachi ihe ọ bụla, naanị ibudata ndị ọrụ mmepe niile.
Emehiela, usoro Rolling dị mma maka ndị na-elekọta distros.
@Elav echeghị m na nke a nwere ike imetụta nkwalite ahụ. Ubuntu ebiela ugbu a, nkwalite kachasị mma ha nwere ike inwe ugbu a bụ na ngwa akọwapụtara maka Ubuntu na kọmpụta nwere nrụnye n'ihu. Ọ bụrụ n ’ileghị anya na Microsoft, nke na - achọghị itinye Windows kwa ọnwa isii iji nọrọ. Echere m na mgbasa ozi kwesịrị ịga ebe ọzọ.
M na-akọwapụta na m kwuru ngwa maka Ubuntu site na ika, m na-ekwu, nke mere na ọ dịghị onye na-eche na m chere na Linux bụ Ubuntu.
Aghọtaghị m ọtụtụ ihe na nke a mana ọ bụrụ na ọ nwere afọ abụọ ịhapụ ya, ọ bụghị nke ịtụghachị. Lee? -> Ọ nwere hapụ cycles, ogologo ma ọ na-eme.
Ọ bụghị n'ezie .. You ga-abụrịrị ụbọchị na mgbe ọhụụ ọhụrụ na-apụta, naanị ị ga-agbanwe aha na sources.list. Nke ahụ bụ, ọ na-adịghị amasị tupu upgrading site na otu mbipute ọzọ, ị ga-ebudata 1GB nke nchịkọta ..
Nke ahụ abịala.
n'ikpeazụ na Ubuntu ha na-eche ihe ziri ezi, m na-ekwu, na arch 😀
Detuo repo ka debian ma ugbu a nhapu okirikiri. Oh Na Na Na Na ..
Banyere esemokwu nke ndị ọkwọ ụgbọ ala, ihe atụ kachasị mma nke ime nke a n'ụzọ kachasị mma bụ ọrụ Chakra, enwere m nvidia agbakwunyere na mgbe kernel na-emelite, a na-emelite onye ọkwọ ụgbọ ala na nke ya dị ka xorg ka ọ ghara ịhụ enweghị nkwekọrịta. nsogbu.
Ọ bụrụ na ha emee na ha agaghị enwe ihe nkiri ọ bụla, na m ahọrọla m iji mgbagharị na-agagharị, ebe ọ bụ na m ga-emelite kwa ọnwa 6, 8 ma ọ bụ 9, ọbụlagodi afọ 1 enweghị isi na m.
A maraworị na Rolling Release Rulez, otu ụbọchị sistemụ niile ga-adaba n'okpuru ụdị ahụ ma ọ bụ n'okpuru ntụgharị ọkara. Site na nke a, Ubuntu ga-achọ naanị ebe nchekwa onye ọrụ AUR ka ọ dabere na PPA, yana enwere ike nwere ike cerca Arch larịị.
Dị ka @nano kwuru
Ọ bụ ezigbo echiche mana ekwesịrị ịme ya nke ọma ma echere m na Ubuntu ga-adịtụ jụụ otu ahụ.
M ga-eche na ụmụ nwanyị nke ubuntu ga-emekwa otu ụzọ ahụ ma ọ bụrụ na ubuntu gafere ụzọ nke ịhapụ mpịakọta.
Nchekwa na njiko ga-ahapụ nsụgharị nsụgharị lts
Zaghachi ka ekwensu